Maitiro ekuisa Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal nhanho nedanho | Kubva kuLinux
Kana iwe uri mutsva muLinux, ivo pamwe vakakurudzira kuti uedze Ubuntu: iri nyore uye nyore kushandisa kugovera iyo, nekuwedzera, ine hushamwari inoonekwa chimiro (kunyange hazvo zvakasiyana nezvawakajaira muWindows) uye izvo zvakazvarwa nechinangwa chekugadzira "Linux yevanhu" .Muchikamu ichi chitsva tinotsanangura maitiro ekuisa Ubuntu 12.10 Yakawanda Quetzal nhanho nhanho ... ehe, ku dummies.
Usati waisa Ubuntu 12.10 unofanirwa kuita nhanho nhatu:
download iyo Ubuntu ISO mufananidzo. Kana iwe usiri kuziva kuti ndeipi vhezheni yekurodha pasi, ndinokurudzira kuti uverenge izvi kutanga kusuma kune dzimwe pfungwa dzekutanga dzinozokubatsira kusarudza chero kugoverwa.
Kamwe iyo BIOS yakanyatsogadziriswa kuti ibhuwe kubva pendrive, tangazve muchina nependrive munzvimbo. Mushure mechinguva chidiki, GRUB 2, iyo Ubuntu boot loader, ichaonekwa. Hedzino nzira mbiri dzekuenda. Zvinokurudzirwa kutanga waedza Ubuntu pasina kuisa, kuti uone kana iyo system ichishanda nemazvo; Ndokunge, kana yako Hardware ikubata iwe zvakanaka, kana iwe uchida system, nezvimwe. Sarudzo yechipiri ndeyekuisa iyo system zvakananga.
Mune ino kesi, isu tichaenda kusarudza sarudzo Edza Ubuntu pasina kuisa.
Kamwe Ubuntu bhutsu, tinya pane iyo icon Isa Ubuntu 12.10. Iyo yekuisa wizard ichaonekwa.
Chinhu chekutanga kusarudza mutauro wekumisikidza. Sarudza español, wobva wadzvanya bhatani Isa Ubuntu.
Simbisa kuti unosangana nezvinodiwa zvishoma zvekumisikidza nekudzvanya Enderera. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti icho chete chakakosha chinodikanwa kuve neinodiwa diski nzvimbo.
Kuva neinternet yekubatanidza inokurudzirwa asi kwete chinhu chega chinodiwa sezvo uchizokwenenzvera kurodha pasi mapakeji eapo pazvinenge zviri nyore kwauri.
Inokurudzirwa zvakare, kunyangwe isiri chinhu chinodiwa, kuti ubatanidzwe panobuda magetsi. Izvi zvinonyanya kuitika kana uri kushandisa laptop, nekuti maitiro ekumisikidza anoshandisa simba rakawanda uye hazvitore hunyanzvi kuti uone kuti hazvina kunaka kuti muchina udzime pakati pekumisikidza, ndoda kana Inobata nekuiswa kweiyo inoshanda sisitimu.
Pamusoro pezvo, muchikamu chino chekumisikidza tinopihwa sarudzo yekusarudza kana tichizotora download yekumisikidza system paunenge uchiisa Ubuntu, sarudzo yandisingakurudzire kutarisa nekuti inogona kunonoka kuita kwacho zvakanyanya.
Imwe sarudzo ndeyekutora yechitatu-bato software iyo inotibvumidza kutamba zvisiri zvemahara zvemultimedia zvemukati senge mp3 mafaera kana kuona multimedia zvemukati pawebhu zvakagadzirwa muFlash, semamwe mavhidhiyo paYouTube kana mitambo pamawebhusaiti senge Facebook.
Ini pachangu ndinofarira kuisa iyi software yega kana gadziriro yekumisikidza yapera, asi hapana dambudziko kana iwe uchida kutarisa iyi sarudzo uye uzviite panguva yekumisikidza maitiro.
Ichi chikamu chakaomesesa: disk kupatsanura.
Chekutanga pane zvese, inofanirwa kujekeswa kuti iyo skrini inogona kunge yakati siyanei zvishoma, zvichienderana nesisitimu yekushandisa kana masisitimu awakatomisikidza pamushini iwoyo. Nekudaro, semuenzaniso, kana iwe uine yekare vhezheni yeUbuntu yakaiswa, iyo sarudzo yekuvandudza iyo system inozoratidzwawo
Mune ino kesi, ngatimbofungidzira chaiwo mamiriro: iwe wakatenga komputa, yakauya neWindows 8, iwe wakaziva kuti zvaive zvisina basa iwe unoda kuyedza chimwe chinhu chitsva.
Hedzino nzira nhatu dzekuenda:
a) Bvisa yekare sisitimu yekushandisa uye isa: iyi ndiyo sarudzo iri nyore: bvisa zvese nekuisa pamusoro. Hapana chikonzero chekupisa musoro wako nezve kupatsanura diski kana chero chinhu chakadai.
b) Isa Ubuntu padivi neWindows: Iyi sarudzo inotibvumidza kuita yekugovana yakagovaniswa pamwe nekumisikidzwa kwazvino kweMicrosoft Windows, ichitipa iyo sarudzo yekugadzira chikamu cheUbuntu Linux kubva pane yemahara dhisiki nzvimbo ine muchina wedu, kunyangwe tichikwanisa kudzora saizi yemataurirwo acho zvakananga kubva yekumisikidza dialog.
c) Kupatsanura dhisiki racho nemaoko.
Kana iwe ukasarudza iyo yechitatu sarudzo, iyo disk yekuparadzanisa wizard inotanga. Naizvozvo, iyi nhanho inosarudzika. Izvo zvinokurudzirwa chete kune vepakati kana vemberi vashandisi vanoziva kuti izvi zvinorevei. Chero danho risiri iro rinogona kukonzeresa kurasikirwa kwedata pane diski. Kana iwe usiri kuda kuzviisa panjodzi, usazviita.
Kana iwe ukafunga nezvesarudzo iyi, kurudziro yangu ndeyekuparadzanisa diski muzvikamu zvitatu:
Dzvanya pa Isa izvozvi. Chinhu chekutanga chichava kusarudza nguva yenguva:
Iwe unongofanirwa kuisa zita rekushandisa uye password, zita rekomputa uye uone kana zvichidikanwa kukumbira password kuti upinde mukati. Kubva pano zvinokwanisika kunyorera yako pachako folda, iyo yandisingakurudzire (nekuti inogona kudzora system) kunze kwekunge iwe uchinyanya kunetseka nezve kuchengetedzeka kwemagwaro akachengetwa pamushini iwoyo.
Mushure menguva diki, iyo faira kopi inopedza. Zvichakadaro, iwe unogona kunakidzwa nemimwe mifananidzo inoratidza zvimwe zvezvakanaka zveUbuntu.
Chekupedzisira, tangazve uye bvisa iyo disk kana pendrive yawakashandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekuisa Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal nhanho nhanho
Jorodhani rakauya akadaro
Ini ndinoda rubatsiro neUbuntu: , processor Intel Dual Core T420 2gHz, mifananidzo ndeye 320mb
Pindura Jorodhani Camey
Oni Batanidza akadaro
Ini ndinongova nemubvunzo, pane imwe system ine linux kana ingori ubuntu?
Pindura Oni Link
CARLOS GELPUD akadaro
zvione iwe pachako http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_Distribution_Timeline.svg
asi kutanga mu linux ubuntu zviri nyore zvakakwana zvakanaka pachedu pc verenga izvi http://www.slideshare.net/zer0/debian-vs-ubuntu
Pindura CARLOS GELPUD
panofanirwa kuve nechikonzero chingave chekuti hauna ropafadzo yemutungamiri ... Sudo uye password yako yekumisikidza tsvaga rubatsiro kubva kuboka revashandisi
Kuti unyore enda kune saiti:
google inoshandisa yemahara software harisi dambudziko rekuenderana kunyangwe chrome yayo saka iri rakashandurwa ubuntu
Ndicho chinhu chakaipisisa chaunogona kuita, Carlos. Kuisa Ubuntu kuburikidza neWubi kuri nyore, asi kune mamwe matambudziko akabatana, akadai sezuva raunoda kuumba chikamu ...
Chinhu chebhutsu KUSVIRA iyo bios inoshanda isai iyo sezvaunoisa iyo.
icho ichokwadi asi ivo vanoda kuratidza kuti ndizvo zvakakosha mushure meizvozvo ivo vanozoziva zvekuita vasina kuvaudza zvese
iyo sarudzo ndeye bn ive isina kusungwa kwezvikamu nekuiisa pamwe chete nemhepo kana mukati windows iyo senge chero imwe chirongwa = winan kana kukunda.
Panyaya yekuve uine chikamu chakagadzirwa chete kuisa Ubuntu, ndeipi sarudzo yaunofanira kusarudza?
Kana izvo zvisati zvaita kuti tisarudze chikamu chediski chatinoda kuisa?
tarisa mhinduro yaOscar Morales ini ndakanganwa kutaura kuti imhaka chete yekuvimba kwakanyanya muUbuntu vanotanga. - imwe ndeyekuti ine iso installer cd vanofanirwa kuumbiridza muex3 kana kushandura makomo ekukwirisa. iwe unogona zvakare kuzviita neiyo cd iso
yako pc muchina wakakura
Kana ini ndikaisa ubuntu pachikamu uyezve ini ndoda kuona mafaera kubva kubuntu andinayo pamawindows partition, zvinoita ????
Edza, kuti inoenda sei uye unogona kana kuchenesa. iwo usb mafolda anodzokorora izvo mumawindo, kuwana kwakarambwa
Oscar Morales akadaro
Uye kana ndikaita partition neChipenga Mashiripiti hazvisi nani here, kana kuve chikamu, ko mamwe masisitimu anoshanda haazobuda here? zvandinoita ??
Ndinogona here kuita chikamu, kana kuti ndinofanira kuchipa padhuze nemawindows 7?
Pindura kuna Oscar Morales
kana zvakanaka ini ndinokurudzira kugadzira matatu / "mashoma 8 gb", chinja "kaviri gondohwe repc yako", imba "shoma 3 gb", muD: kubva kumashure kuenda kumberi "kuti usakanganisa mafaera ako"
Tito vilanova akadaro
Zvitorere mhosva pa gmail kana webapp, usanyanya kuzvitutumadza kufunga kuti chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwatiri tese.
Pindura Tito Vilanova
Sei uri kumurwisa? Pamwe aingoda kubatsirwa.
Ndine mubvunzo, ini ndine yekare HP PC ine izvi zvirevo: 4Gb ram DDR2, Intel core 2 duo processor pa2,66 Ghz, 1 Gb yeNividia 8400Gs kadhi revhidhiyo, 250 Gb yedhisiki rakaomarara, neaya maratidziro ndinogona kuisa Quantal Quetzal ? (Pasina kuve nezvinetso zvekutsetsenura?)
Icho hachisi timu zvachose, hapana chekare. Ini ndinoshanda ne3 makore ane laptop, isina simba kupfuura iyo uye ine 512MB ati uye ini ndinorekodha yakaderera latency odhiyo uye ndinotamba mitambo mitsva zvakanaka pasi pehuwandu.
Susho demo akadaro
pandinotangazve ini handitore iyo grub yekusarudza iyo system yekupinda, iwe unoziva sei?
Pindura Susho Ax
kana iwe uri mukuparadzanisa ita shuwa kuti pazasi panoti pekuisa boot loader, ita shuwa kuti iri mu dev / sda (kazhinji ndiyo yekutanga sarudzo)
Ndinoziva sei kuti ndeipi, kana Windows kana Ubuntu, painogadzirisazve muInisa Ubuntu padhuze neWindows
Elver gonzalez akadaro
iyo dzidziso yekuisa ubuntu yakanaka kwazvo ... Chinhu chega chisingaratidzike sezvakanaka kwandiri ndechekuti; kutaura kuti mahwindo ndeekupenga, kuti haufarire hazvireve kuti zvakaipa. Zvinogona kunge zviri kumashure kukoshesa uye kukamurwa.
Pindura Elver Gonzalez
Mavara ezvikamu zvakasiyana uye zvinodaro zita racho
Roger Eduardo akadaro
Asi iye anotaura nezvechikamu icho chakaiswa padhuze ne windows8, iwo mabhokisi maviri anogona kudzoreredzwa anoonekwa ... dambudziko nderekuti haritaure kuti bhokisi nderei raani.
Kana iri senge ubuntu 12.04 iyo kurudyi iri ubuntu uye iya kuruboshwe windows.
Ini handidi kuzviisa panjodzi, ndicharamba ndichitarisa.
Pindura Roger Eduardo
alonso esparza akadaro
iyi vhezheni yakanaka
Pindura kuna alonso esparza
Antonio Alcaraz placeholder mufananidzo akadaro
Ndiri kuda kuisa ubuntu pane HP L110 mini laptop, haina CD kana DVD chete USB, ndinoisa sei quetzal?
Pindura kuna Antonio Alcaraz
Ndinokurudzira kuti uverenge https://blog.desdelinux.net/distribuciones
Ramba uchibatsira isu vedu vakatanga neiyi yemahara LINUX software isingatsvage kupfuma seMicrosoft iyo isina tsitsi inopfuma uye iyi Bill Gates ine mari yakawanda uye haina hana ichiziva kuti mitengo yesoftware yakagadzirwa navo inodhura kwazvo kune maresults mari yakawanda uye yei ???? Ivo vanofanirwa kumhan'arira iyo US kune iko kupfuma zvisiri pamutemo zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi.
Ndine mubvunzo ………… uye ndezvekuti kana ini ndichiedza kuisa Ubuntu Windows 8 isingandizive, chii chandinofanira kuita kuti ikwanise kuziva Windows 8, yakanga yatotanga kuiswa pakombuta yangu …… Thanks
Ramon Lozano akadaro
Ndatenda nezano rako, ndingade kuziva kana ndichigona kuiisa muXP sezvo vachiti system ino ine nguva shoma yekurarama. Asingaperi magumo.
Pindura kuna Ramón Lozano
JORGE WIEDMAN akadaro
KAMWE KAKAISWA, HANDI KUZIVA KUTI NDINOGONESA SEI MAONESI NEVANHU VEVENYU NEZVINHU ZVANDINOFANIRA KUTSINDA ZVIITIKO ZVANDINAI MUWINDOW MAIL NEMIMhanzi YANDAKASARUDZA MUITOBE UYE NDINOGONA SEI KUTI NDITSIMUDZIDZE ZVIMWE MUUB?
Pindura JORGE WIEDMAN
Maitiro ekuisa Ubuntu 16.04 kubva pakutanga?
Pindura kuna anony